Ilaahey Dartii U Caawi Carruurtan Qur’aanka Ilaahay Cidlada Ku Baranaysa | Gacanlibaaxnews
Ilaahey Dartii U Caawi Carruurtan Qur’aanka Ilaahay Cidlada Ku Baranaysa
June 17, 2018 - Written by
Waxa ay wax ku baranayaan meeshaad aan arkeyso, Waxa ay bartaan Qur’aanka ah oo loogu dhigo looxaas aad arkeysaan ee sawirka idinka muuqda. Baahida ugu weyn ee hadda ku geedaamani waa in aaney haysan gabood/hoy ay dhaxanta, roobka iyo cadceedda ba ka galaan. Waxa kale oo aaney haysanid aqabkii waxbarashada sida: kutubkii iyo buugaagtii ay wax baran lahaayeen, kuraastii ay ku fadhiisan lahaayeen. Fadlan illahey dartii u caawi caruurtaa yar yare e garabkaaga u baahan. Guud ahaan ummada muslimiinta ah waxaa laga codsanayaa iney caruurtaa Alle dartii u caawiyaan. Wixi caawimo ah, waxaa aad ku hagaajin kartaa:
Hadii aad Norway joogto waxaa aad caawimada ku diri kartaa.